Maraykanka oo 27-million oo Dollar dul-dhigay 6 Hoggaamiye oo ka tirsan Xarakadda Alshabaab. | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Maraykanka oo 27-million oo Dollar dul-dhigay 6 Hoggaamiye oo ka tirsan Xarakadda...
Maraykanka oo 27-million oo Dollar dul-dhigay 6 Hoggaamiye oo ka tirsan Xarakadda Alshabaab.
(Radio Biadoa, 11 November 2015) Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay Abaalmarin Lacageed oo dhan 27-million oo Dollar ku bixinayso Madaxyadda 6 Hoggaamiye oo ka tirsan Taliska Xarakadda Alshabaab.
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Maraykanka ayaa Waxaa lagu sheegay in qofkii soo sheegay Xog horseedi karta in la qabto ama la dilo Hoggaamiyaha Alshabaab, Abu Cubaydah la siinayo lacag dhan 6 million oo Dollar.
Abu Cubaydah waxa Hoggaamiyaha Alshabaab loo magacaabay, kadib, markii ay Maraykanka duqeyn ku dileen Amiirkii Xarakadda Alshabaab, Axmed Cabdi Godane bilowgii bishii September ee sannadkii hore ee 2014-kii.
Sidoo kale, Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka waxay min 5 million oo Dollar dul-dhigtay C/raxmaan Maxamed Warsame oo loo yaqaanoMahad Karate, Macallim Daa’uud iyo Xasan Afgooye oo ka tirsan Madaxda Sarsare ee Xarakadda Alshabaab.
Mahad Karate ayaa lagu eedeeyey inuu ahaa Maskaxda ka dambeysay Weerarkii bishii April 2-ii ee sannadkan lagu qaaday Jamaacadda Garissa, oo lagu dilay 148 Arday Kenyan ahaa.
Dhinaca kale, Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka waxay min 3 million oo Dollar dul-dhigtay Macallim Salmaan iyo Axmed Imaan Cali oo ka tirsan Taliska Sare ee Alshabaab.
Macallim Salmaan ayaa lagu eedeyey inuu Madax ka yahay sidii Dagaalyahanno Shisheeye ah loogu qori lahaa Alshabaab, halka Axmed Imaan Cali lagu eedeeyey inuu Muwaadiniin Kenyan ku soo biiriyey Dagaalyahannadda Alshabaab.
Ugu dambeyn Qoraalka ka soo baxay Maraykanka ayaa waxa uu ku eedeeyey Alshabaab inay tan iyo sannadkii 2008-dii dileen Kumanaan qof oo isugu jiray rayid, Shaqaale Gargaar iyo Nabad-ilaaliyaal, waa sida lagu xusay Qoraalkaas la soo dhigay Bogga Internetka ee Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka “US State Department”.
Waxaa kaloo Alshabaab lagu eedeeyey weerarkii Westgal Mall ee Nairobi iyo Jamaacadda Garissa.